Soosaarayaasha Qaybta Nadiifinta Dhiigga iyo Warshad - Soosaarayaasha Qaybta Nadiifinta Dhiigga Shiinaha
Hemodialysis, dialyzer wuxuu u shaqeeyaa sidii kelyo macmal ah wuxuuna badalaa shaqooyinka muhiimka ah ee xubinta dabiiciga ah.
Dhiiggu wuxuu dhex maraa illaa 20 kun oo fiilooyin aad u wanaagsan, oo loo yaqaan 'capillaries', oo ku urursan tuubo balaastig ah oo qiyaastii 30 sentimitir dheer ah.
Qunbulada waxaa laga sameeyay Polysulfone (PS) ama Polyethersulfone (PES), caag gaar ah oo leh shaandheyn gaar ah iyo astaamaha iswaafajinta hemo.
Daloolada ku jira xinjirooyinka waxay ka shaandheeyaan sunta dheef-shiid kiimikaadka iyo biyaha xad-dhaafka ah dhiigga waxayna ka saaraan jirka iyaga oo wata dheecaanka sifeynta dhiigga.
Unugyada dhiigga iyo borotiinnada muhiimka ah ayaa weli ku jira dhiigga. Dialyzers waxaa loo isticmaalaa hal mar oo kaliya inta badan wadamada warshadaha leh.
Codsiga bukaan socodka ee hemodialyzer fiber faaruq ah oo la tuuro ayaa loo qaybin karaa laba taxane ah: Dheecaan Sare iyo Dheecaan Hoose.
Miirayaasha Ultrapure dialysate waxaa loo isticmaalaa sifeynta bakteeriyada iyo pyrogen
Waxaa loo adeegsaday aaladda hemodialysis ee uu soo saaray Fresenius
Mabda'a shaqada waa in la taageero xuubka faleebada godan si loo farsameeyo dialysate
Aaladda baabi'inta dhiig baxa iyo diyaarinta dialysate waxay buuxisaa shuruudaha.
Dialysate waa in la beddelaa 12 toddobaad ka dib ama 100 daaweyn ah.
Badeecadan waxaa loo isticmaalaa habka nadiifinta dhiiga ee caafimaad sida dhuun loogu talagalay daaweynta hemodiafiltration iyo daaweynta hemofiltration iyo bixinta dheecaanka beddelka ah.
Waxaa loo isticmaalaa hemodiafiltration iyo hemodiafiltration. Shaqadeedu waa in la qaado dheecaanka beddelaya ee loo isticmaalo daaweynta
Qaab dhismeed fudud
Noocyo kala duwan Qalabka tubbada loogu talagalay HDF waxay ku habboon yihiin mashiinka sifaynta kala duwan.
Waad ku dari kartaa daawo iyo isticmaal kale
Waxay inta badan ka kooban tahay dhuumaha, T-wadajirka iyo tuubada mashiinka, waxaana loo isticmaalaa hemodiafiltration iyo hemodiafiltration.
SXG-YA, SXG-YB, SXJ-YA, SXJ-YB, SXS-YA iyo SXS-YB
Xirmo hal bukaan ah, xirmo hal bukaan ah (xirmo ganaax ah),
Xirmo laba-bukaan ah, xirmo laba-bukaan ah (xirmo ganaax ah)